Mashiinka Xaraynta iyo Goynta loo yaqaan 'CO2 Laser Engraving iyo Jarida Mashiinka DA 1390 / DA1612
Tilmaamaha: 1. Mashiinka goynta laserkeena waxaa lagu gartaa aaggeeda shaqeynta, lambarada moodada: DA6040, DA9060, DA1060, DA1390, DA1590, DA1410, DA1610, DA1612, iwm shuruudahaaga ama cabirka shaqada, agabka waxaanan ku siin doonnaa talo soo jeedinteena. 2. Mashiinkan taxanaha ahi waxay qaadanayaan tikniyoolajiyada xakamaynta dhijitaalka DSP, ku daraya qaab loo habeeyay iyo qaab-dhismeed si loo dammaanad qaado shaqo deggan. 3.Waxay adeegsataa xogta dekada USB iyadoo la adeegsanayo keyd ballaaran ...
Mashiinka Laydhka leh ee loo yaqaan 'Multier laser madaxa CO2 Laser Engraving iyo Jarida Mashiinka
Astaamaha: 1. Mashiinkan waxsoosaarka ah wuxuu qaatay qaabeyn madax badan, waxay kadhigi kartaa gogoldhig weyn oo madax weyn sidoo kale madax badan oo ah samll size goynta si loo hagaajiyo waxsoosaarka wax soo saarka iyo keydinta qiimaha. 2. Mashiinku wuxuu dhajiyaa xakameynta dhijitaalka ah ee DSP iyo naqshadeynta isku dhafan, oo leh qiime sare. Agabfududii u dambeeyay ayaa loo adeegsan karaa iskudhafyada kumbuyuutarrada xirfadeed ee xirfadeed sida CorelDraw 、 Auto CAD iwm. Wuxuu dhajiyaa xog-isweydaarsiga xogta fiilada, wuxuuna taageeraa wareejinta ...
DA1390CCD Mashiinka goynta Laser oo wata Sawirka Kaamarada
Tilmaamaha DA 1390CCD mashiinka laser waxaa si balaadhan loogu isticmaalaa dharka iyo warshadaha xayeysiinta, si loo gooyo sumadda ama sumadda maqaar ama maro. Aaladda dijitaalka ah ee dijitaalka ah waxay ka caawineysaa mashiinkan inuu helo geeska sumadda ama calaamadda oo loo gooyo iyadoo la raacayo geeska. Waxqabadka shaqada si heer sare ah ayaa loo wanaajiyey. Mashiinka ikhtiyaariga ah ee leh nidaamka quudinta auto. Dharka warshadaha ee lagu dabaqi karo, warshadaha kabaha, kabaha kabaha, dharka dharka, dharka dharka, toy, calaamadaha ganacsiga gaarka loo leeyahay, boorsooyinka hawada, maqaarka, boorsada, xerada, isboortiga, gawaarida inte ...